wordpress မှာ plugin
version 0.7.3 – Shortcodes အထောက်အပံ့
မတ်လ 25, 2011 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 55 comments
ဒီနေ့ဗားရှင်းပြန်လွတ်လာပါပြီ 0.7.3 wordpress ကိုရေးသားချက်များအတွင်းရှိ shortcodes အတွက်အထောက်အပံ့ကထပ်ပြောသည်သော, တချို့လဲသပ်ရပ်လှပတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့သုံးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးငါတို့သည်အပေါ်က video ကိုဖန်တီးခဲ့ကြ, သင်သည်ငါးမိနစ်ရှိပါကဒါကြောင့်အခမဲ့ပြု သာ. ကောင်း၏ဘယ်အရာမျှ, ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှု. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကျနော်တို့မှာစာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုခြင်း recommand လို http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
တချို့ကပိုပြီး bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများကဤလွှတ်ပေးရန်ထည့်သွင်းခဲ့သည်, အဓိကအားဖြင့်ဝန်ကိုလျှော့ချခြင်း (နှင့်ထပ်) ဘော့ပြရန်ပြင်ဆင်ရန်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ဖန်တီးစေခြင်းငှါ, နှင့် bot တွေဟာများအတွက်မလိုအပ်သည့်ဖိုင်များကို session ကိုဖယ်ရှားပစ်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: 0.7, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, shortcodes, ဗီဒီယို, wordpress မှာ plugin